Apple wuxuu ku shaqeeyaa abuuraha Memojis otomaatig ah | Wararka IPhone
Apple wuxuu ku shaqeeyaa qalab sameeyaha xusuusta
Mid ka mid ah "sheeko-xariifyada" ay Apple soo bandhigto waxyaabaha muhiimka ah ka dib qodobbada ayaa ah ku darista Memoji, kuwa yaryar ee firfircoon ee noo oggolaanaya inaan wax badan ka helno hawlgalka Aqoonsiga Face iyadoo ujeedadu tahay inaan ku muujin karno dareenkeenna Emojis shaqsiyeed qaabka istiikarada. Runtu waxay tahay inay yihiin wax aad u xiiso badan, iminkana ay Apple ku dhejiso koodhadhka kumbuyuutarka kumbuyuutarka waxaan u isticmaalayaa si ka badan sidii hore, laakiin aan wajahno, abuurista Memoji munaasabado badan runtii waa caajis. Apple waxay ku shaqeysaa nidaam soo saaraya Memojis shaqsiyadeed oo loogu talagalay dadka isticmaala sawirradooda, sidaa darteed maahan inaan abuurno midkeenna.
Hadda Memojis-kan ayaa si buuxda loogu dhex daray kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ee 'iOS', waxaana laga dhigay boqolkiiba boqol inay ku habboon yihiin adeegga istiikarka oo ay bixiyaan WhatsApp iyo Telegram, tusaale ahaan, marka wadaagistooda ma aha oo kaliya wax aad uga fudud sidii hore, laakiin sidoo kale waxay bixisaa natiijooyin ka xiiso badan xagga xawaaraha iyo dhammaadka. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay AppleInsider Shahaadooyin taxane ah ayaa muujinaya horumarka mustaqbalka ee nidaamkan.
Shahaadooyinkani waxay adeegsadaan sawirka isticmaalaha si ay u go'aamiyaan astaamahooda wajiga, ka dibna xulo matalaadda dijitaalka ah ee isticmaalaha oo ku milmaan hal avatar. Tan awgeed, waxay u adeegsaneysaa sawirrada adeegsadaha, cabbiraadda iyo hababka wax-qabadka, kala-soocidda muujinta iyo nooc kasta oo macluumaad ah oo ku habboon ujeedkan.
Noqo sida ay doonto ha noqotee, waa wax xiiso leh in tan si toos ah loo sameeyo, gaar ahaan kuwa isticmaala ee aan aqoonta u lahayn nidaamka. Oo intaas oo dhanna in kastoo ay xaqiiqda tahay in Memoji ay leeyihiin heer aad u sarreeya oo habayn ah, xitaa waad xidhan kartaa AirPods, maxaad u malaynaysaa? Si kastaba ha noqotee, wali waa emoji waxoogaa shakhsiyan ah, adeegsigeedu wali waa tiro yar yahay, gaar ahaan hadda markaan ku abuuri karno istiikaradayaasheenna barxad kasta, laakiin halkaas ayay ku jirtaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple wuxuu ku shaqeeyaa qalab sameeyaha xusuusta
Fiidiyaha cusub ee video 'Lose you to love me' ee Selena Gomez waxaa lagu duubay iPhone 11 Pro
Nooca 'Geskin' oo aan lahayn darajo iyo anteeno loogu talagalay 5G